Gịnị mere ndị ahịa ji agbahapụ ihe ha zụtara? | ECommerce ozi ọma
Gịnị mere ndị ahịa ji agbahapụ ihe ha zụrụ?
Susana Maria Urbano Mateos | | Ahịa ahia, Ụzọ ịkwụ ụgwọ
Enwere ọmụmụ ihe na-egosi na n’agbata 50 na 70% nke ndị na-azụ ahịa anaghị emezu iwu ha. Ihe data a gosiputara nke ahu ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-ewulite ume iji weghachi ahịa ndị furu efu. Goodzọ dị mma iji mee nke a bụ ịmalite site na ịchọpụta ihe kpatara ndị ahịa ji agbahapụ nzụta.
Otu n'ime Isi ihe kpatara ya bu na ndi ahia azutala Ecommerce nke ahụ na-enye ha ọnụahịa nzụta ka mma. Iji merie mgbahapụ ndị a, ọ bụ ezi echiche ịziga ndị na-azụ ahịa akwụkwọ ikike ma ọ bụ nwepu ego mgbe ịhapụ ịzụrụ.
Ọ kwesịkwara iburu n’obi na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-ahụ ọnụahịa nke ngwaahịa ndị ahụ ma kwenye na nke a bụ ọnụahịa ikpeazụ. N'ọtụtụ ọnọdụ ị ga-agbakwunye ọnụahịa nke mbupu, nke na-abawanye ọnụ ahịa ma n'ezie na-akụda onye zụrụ ihe. Dị ka o kwesịrị, nyefee mbupu n'efu iji nwee ntụkwasị obi.
Ihe ọzọ kpatara ya ndị ahịa anaghị azụta ihe metụtara usoro nzụta ahụ n'onwe ya, ọ dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na onye zụrụ ahịa na mberede achọpụta na e nwere ọtụtụ peeji nke ọ na-ewe ogologo oge iji mezue nzụta ahụ, ọ ga-abụrịrị na ha ga-ahapụrịrị ụgbọ ibu azụmahịa.
Ikekwe otu n'ime ihe ndị kasị ezigbo ihe kpatara na onye ahia ji gbahapu ahia Ọ nwere na-eme na-adịghị atụkwasị obi gị Ecommerce. Iji mee ka ndị ahịa tụkwasị gị obi na Ecommerce gị, ị ga-enyerịrị usoro nchekwa na nchekwa data, nwee ọkachamara websaịtị mara mma ma maa mma, ọsọ a na-anabata ngwa ngwa yana ezigbo nkwado ndị ahịa, n'etiti akụkụ ndị ọzọ.
N'ikpeazụ ọ ga-ekwe omume na ndị na-azụ ahịa na-enwe mmechuihu n'ihi na ha tụrụ anya ịchọta Kupọns ego ma ọ bụ nkwalite pụrụ iche maka ịbụ ndị ahịa ọhụrụ ma ọ bụ ndị na-alọghachi azụ.
Ihe ọ sọrọ ya ya bụrụ, ọ dị mkpa ịme ihe iji gbochie ịzụrụ ihe ndị ahụ niile ịkwụsị imebi azụmahịa Ecommerce gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Gịnị mere ndị ahịa ji agbahapụ ihe ha zụrụ?
Hi Susan! Ozi na-adọrọ mmasị nke dabara na nke anyị bipụtara ụnyaahụ na Deliverea: 'aghụghọ 7 iji gbochie ndị ahịa gị ịhapụ ụgbọ ibu azụmahịa'. Anyị kwenyere na, na njedebe, ihe dị mkpa bụ ịkwado ahụmịhe onye ọrụ ma gosi gị ozi niile dị mkpa tupu usoro ịzụta ka ị wee nwee nkọwa niile.
Etu ị ga - esi ahọrọ isiokwu ziri ezi maka ụlọ ahịa Ecommerce gị
Etu ị ga-esi enweta okporo ụzọ na netwọkụ mmekọrịta maka Ecommerce gị